कथाः 'क्रोधको त्यो दुई मिनेट' | Citizen Post News
कथाः 'क्रोधको त्यो दुई मिनेट'
२०७६ कार्त्तिक १ गते १२:४४
एक युवकले विवाहको दुई बर्षपछि परदेश गएर व्यापार गर्ने इच्छा आफ्नो पितालाई भन्यो । पिताले स्वीकृति दिए । र, उ आफ्नी दुई जिउकी श्रीमतीलाई आमा-बाउको जिम्मा लगाएर व्यापारको लागि विदेश हिड्यो ।
परदेशमा मेहनत गरेर निकै धन कमायो । धन कमाउनमा नै १७ बर्ष बिताएपछि उ सन्तुष्टि भयो । र, वापस घर फर्कने इच्छा जाग्यो । श्रीमतीलाई पत्र लेख्दै उसले आफू आउने सूचना दियो र जहाजमा बस्यो ।
उसले जहाजमा एक व्यक्ति भेट्टायो जो दुःखी मन लिएर बसिरहेको थियो । पैसा कमाएर घर फर्किएको सेठले उसको उदासीको कारण सोध्यो । उसले भन्यो कि यो देशमा ज्ञानको कुनै कदर नै छैन ! म यहाँ ज्ञानको सूत्र बेच्न आएको थिएँ तर कोई पनि लिन तैयार छैनन् ।
सेठले सोच्यो कि यो देशमा मैले धेरै धन कमाएँ । यो त मेरो कर्मभूमि हो । यो दुःखीको मान राख्न भए पनि मैले उसले ज्ञानको सूत्र खरिद गर्नुपर्छ । त्यसपछि उसले ज्ञानको सुत्र खरिद गर्ने इच्छा प्रकट गर्यो । ज्ञानीले भन्यो, 'मेरो हरेक ज्ञान सूत्रको मुल्य ५०० स्वर्ण मुद्रा हो ।'
सेठलाइ सौदा महँगो लागिरहेको थियो । तैपनि कर्मभूमीको मान राख्न्नको लागि ५०० मुद्रा दियो । उक्त ज्ञानीले पहिलो ज्ञानको सूत्र दियो-'कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा पहिला दुई मिनेट रोकिएर सोच्नु ।' सेठले सूत्र आफ्नो कापीमा लेखेर राख्यो ।
केहि दिनको यात्रापछि रातिको समयमा उ आफ्नो नगरमा पुग्यो । उसले सोच्यो कि यतिका बर्ष पछि घर फर्केको छु, बिस्तारै खबर नदिई सिधै पत्नीलाई भेटेर किन आश्चर्य चकित नबनाउँ !
घरको चौकीदारलाई चुप लाग्ने इशारा गरेर उ सिधै आफ्नो पत्नीको कोठामा गयो । त्यहाँको स्थिति देखेर उसको खुट्टा तलको जमिन फाटेझैं भयो । पलंगमा उसकी पत्नीसँग एक युवक सँगै सुतिरहेको थियो ।
निकै क्रोधित भई सोच्न लाग्यो कि म प्रदेशमा पनि यसको चिन्ता गरी रहें र यो यहाँ अरु पुरुषको साथ छे ! दुबैलाई जिउँदो छाड्दिन । क्रोधमा उसले तलवार निकाल निकाल्यो ।
हिर्काउनै गइरहेको थियो कि त्यहि बेलामा उसलाई ५०० अशर्फीबाट प्राप्त 'ज्ञानसूत्र' याद आयो । कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा पहिले दुई मिनेट सोच्नु । सोच्नको लागि उ रोकियो । तलवार पछाडी तान्दा एउटा भाँडामा ठोक्कियो ।
भाँडा तल झर्यो । पत्नीको निन्द्रा खुलेसँगै नजर आफ्नो पतिमा पर्यो । उ खुसी भइ र भनी,'हजुर बिना यो जीवन सून्य थियो । प्रतिक्षामा यतिका वर्ष कसरी बिताएँ, यो त मैंले मात्र जान्दछु ।'
सेठ त पलंगमा सुतेको पुरुषलाई देखेर क्रोधित थियो । पत्नीले युवकलाई उठाउनका लागि भनिन्,' छोरा उठ ! तिम्रो पिता आउनु भएको छ । युवक उठेर जसरी पितालाई प्रणाम गर्न झुक्यो । उसको टाउकोको पगड़ी तल भुईंमा झर्यो । उसको लामो कपाल छरियो ।
सेठकी पत्नीले तब भनिन्, 'स्वामी यो हजुरको छोरी हो । बिना पिता यसको मान इज्जतमा कुनै आँच नआओस् भनेर मैंले यसलाई बचपनदेखि नै पुत्र समान नै पालनपोषण र संस्कार दिएकी छु ।'
यो सुनेर सेठको आँखाबाट आँसु झर्यो । पत्नी र छोरीलाई अँगालो हालेर सोच्न थाल्यो कि यदि आज मैले त्यो ज्ञान सूत्रलाई नअपनाएको भए हतारमा कत्रो अनर्थ हुन्थ्यो । मेरो नै हातबाट मेरा निर्दोष परिवार खतम हुन्थे ।
ज्ञानको यो सूत्र त्यस दिन त मलाई महँगो लागेको थियो । तर यस्तो सूत्रको लागि ५०० अशर्फी धेरै कम हो । त्यसैले ज्ञान निकै अनमोल हुन्छ ।
कथाको सारः जीवनको दुई मिनेट जसले दुःखहरुबाट बचाएर राख्न सक्छ, त्यसले सुःखको बर्षाद गर्न सक्छ । त्यो हो क्रोधको दुई मिनेट । भागवतमा पनि यहि सन्देश दिइएको छ । भनिएको छ कि 'यदि तिम्रो कामबाट कसैको अपकार हुन्छ भने त्यस कामलाई एक दिनको लागि टाली देउ ।' यदि उपकार हुन्छ भने तुरुन्त गर ताकी कहीँ उपकारको विचार न बदलियोस ! मन परेमा धेरैभन्दा धरैसम्म पुर्याउन सेयर गरिदिनुहोला । जय जय श्री राधे । #गणेशजी #कथा
प्राधिकरणमा घिसिङलाई पुनः नियुक्ती नदिए विकल्प 'हितेन्द्र देव'
२०७७ असोज ४ गते १४:१७
अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट विदेशमा रहेका २४४ नेपालीको निधन
२०७७ असोज ४ गते १४:०९
पहिलो पटक सेनामा कार्यरत एक सैनिकको कोरानाबाट मृत्यु
२०७७ असोज ४ गते १३:१०
त्रिशुलीमा खस्यो पेट्रोल बोकेको ना ४ ख २८२२ नम्बरको ट्रयाङकर
२०७७ असोज ४ गते ०९:४७
बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का, ठेक्का दिँदा ४० करोड रुपैयाँको चलखेल
२०७७ असोज ४ गते ०९:२९